मस्तिष्काघातबाट पूर्वसांसद रानाभाटको निधन – Health Post Nepal
मस्तिष्काघातबाट पूर्वसांसद रानाभाटको निधन
२०७७ फागुन १० गते १८:२३
पूर्वसांसद एकनाथ रानाभाटको आज निधन भएको छ। चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा दिउँसो १ बजेर ५८ मिनेटमा उनको निधन भएको हो।
उच्च रक्तचापका कारण मस्तिष्काघात भई १६ दिनदेखि उहाँको मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको थियो। रत्ननगर नगरपालिका वडा नं १४ पिठुवा निवासी रानाभाट वि.सं. २०५६ मा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए। कांग्रेस रत्ननगरका सभापति रुपनराज घिमिरेका अनुसार वि.सं. २००९ कात्तिक २८ गते स्याङ्जाको भाटखोलामा उनको जन्म भएको थियो।
रानाभाट नेपाली कांग्रेस चितवनका पूर्वसचिव, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका पूर्वउपाध्यक्षलगायत विभिन्न पदमा रही कार्य गरेका थिए। उनका एक श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी रहेका छन्। उनको मङ्गलबार बिहान देवघाटमा अन्त्येष्टि गरिँदैछ।
कांग्रेस चितवनले शोक वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीले एक निष्ठावान् नेता गुमाएकामा दुःख प्रकट गरेको छ। जिल्ला सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले उनको निधनले सिङ्गो कांग्रेसलाई अपूरणीय क्षति पुगेको बताए। उनका अनुसार बिहान ८:३० बजेदेखि एक घन्टा उनको शव पार्टी कार्यालय नारायणगढमा राखिनेछ। रासस